ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းက ဒန်ညက်စ်မြို့မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီ ၂၈ ရက်နေ့က ယူကရိန်း ထောက်ခံသူတွေနဲ့ ရုရှားထောက်ခံသူတွေကြား ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နှစ်ဖက်စလုံး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။
ယူကရိန်းထောက်ခံသူ ၂ ထောင်လောက်က ဒန်ညက်စ်မြို့တွင်း ယူကရိန်းအလံတွေကို ဝှေ့ယမ်းပြီး လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာကို စစ်ဝတ်စုံနဲ့ ရုရှားထောက်ခံသူတွေက ဘော့ဘော ပတ်တံတွေနဲ့ ရိုက်နှက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဖက်စလုံးက လူတွေ ဦးခေါင်းမှာ ဒဏ်ရာတွေ ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။
ဒဏ်ရာမပြင်းထန်ပေမယ့် ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းမှာ နောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ သွေးထွက် သံယိုမှု ဖြစ်ပါတယ်။
ရုရှားနိုင်ငံက ယူကရိန်းအရေးမှာ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရုရှား ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် ၇ ဦးနဲ့ သမ္မတပူတင်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ ရုရှားကုမ္ပဏီ ၁၇ ခုကို အမေရိကန်နိုင်ငံက ဧပြီ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ထပ်မံ ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။
ပိတ်ပင်ခံရသူတွေထဲမှာ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ အဓိကရေနံကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ ရုရှားအဆင့်မြင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌတို့လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ စွမ်းအင် နဲ့ ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ အပါအ၀င် ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အဓိကကျတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို ပစ်မှတ်ထား ပိတ်ပင်တာ ဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေက ဆိုပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ ပိတ်ပင်မှုတွေ အားလုံးဟာ ရုရှားခေါင်းဆောင်တဦးချင်းစီနဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တခုချင်းစီကို အတိအကျ ပစ်မှတ်ထားပိတ်ပင်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းက ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ ကာကစ်မြို့ မြို့တော်ဝန်ဟာ ဧပြီ ၂၇ ရက်နေ့က သေနတ်ပစ်ခံရပြီး ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။
မြို့တော်ဝန်ဟာ ယူကရိန်းအစိုးရကို ထောက်ခံသူတဦး ဖြစ်ပြီး ယူကရိန်းနိုင်ငံခွဲထွက်ရေးနဲ့ ယူကရိုင်းပိုင် နယ်တွေကို သိမ်းပိုက်တာတွေကို ဆန့်ကျင်သူတဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ - သာနိုးဝေ
ဓာတ်ပုံ - ကိုဟန်ဝင်းအောင်
နှစ်နိုင်ငံ ပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားနေသည့် နယ်မြေတွင် မြောက်ကိုရီးယား စစ်ရေးလေ့ကျင့်
နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားနေတဲ့ တောင်နဲ့ မြောက်ကိုးရီးယားနယ်စပ်က ရွမ်ဖုန်ကျွန်းနဲ့ ဖျင်ယုံကျွန်းနားမှာ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေ ဒီနေ့ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
အခုလို လက်တွေ့ ပစ်ခတ်ခြင်းနဲ့ လေ့ကျင့်မှုတွေ မပြုလုပ်ခင် တောင်ကိုရီးယားကို အသိပေးခဲ့တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ပြောခွင့်ရ ကင်မင်ဆွတ် (Kim Min-Seok) က တောင်ကိုရီးယားတပ်တွေကိုလည်း အဆင့်သင့် ပြင်ထားပြီး တောင်ကိုရီးယား ငါးဖမ်းစက်လှေတွေကိုလည်း အဲ့ဒီနေရာက ထွက်ခွာဖို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားအမြောက်ကျည်တွေ တောင်ကိုရီးယားနယ်နိမိတ်ထဲကို ကျရောက်လာရင်တော့ အပြင်းအထန် တုံ့ပြန်မယ်လို့ တောင်ကိုရီးယားပြောခွင့်ရက ပြောဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လကုန်ကလည်း မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက အခုလိုပဲ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အမြောက်ကျည် ၁၀၀ ကျော်ဟာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံထဲကို ကျရောက် ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကလည်း အမြောက်ကျည် ၁၀၀ ကျော် တုံ့ပြန်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်က ရွမ်ဖုန်ကျွန်းပေါ် မြောက်ကိုရီးယားက လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း နယ်စပ်ကျွန်းတွေမှာ တောင်ကိုရီးယားတပ်တွေကို အင်အားတိုးမြှင့်ချထားခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယာဉ်မောင်းအိပ်ငိုက်ပြီး အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ လမ်းဘေးဝဲဘက်ခြမ်းရှိ ဘာရီယာတုံးများအား ၀င်ရောက်တိုက်မိ
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့ နံနက် ၃ နာရီခွဲအချိန် နေပြည်တော်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၁၉၉/၂-၃)ကြားတွင် ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းအရ ပလွေးအမြန်လမ်းရဲစခန်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များက သက်သေများနှင့်အတူ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
စစ်ဆေးချက်အရ ရန်ကုန်မှမုံရွာသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေ သိန်းနိုင်လင်း(၃၃)နှစ်မောင်းနှင်လာသော ၂စ/xxxx လင့်ခရူဇာအဖြူရောင်ယာဉ်မှာ ယာဉ်မောင်း အိပ်ငိုက်ပြီး အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ လမ်းဘေးဝဲဘက်ခြမ်းရှိ ဘာရီယာတုံး(၁၆)တုံးအား ၀င်ရောက် တိုက်မိကာ လမ်းလယ်ကျွန်းပေါ်တွင် ရပ်တန့်သွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ထိုသို့တိုက်မိမှုကြောင့် ယာဉ်ပေါ်တွင်လိုက်ပါလာသူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိသော်လည်း ယာဉ်၏ ရှေ့ခေါင်းပိုင်း
ပိန်ချိုင့်၊ ရှေ့ဝဲဘီးပြုတ်ထွက်၍ တန်ဘိုးငွေကျပ်သိန်း(၃၀)ခန့်နှင့် ဘာရီယာတုံး(၁၆)တုံး၊ တန်ဘိုးငွေကျပ်(၃)သိန်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းနှင့် သိန်းနိုင်လင်းအား ပလွေးအမြန်လမ်းရဲစခန်း ယာဉ်(ပ)၉/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၂၇၉ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီမှာ အရက်ပူတွေအလွန်အကျွံသောက်လို့ သေကြတယ်ဆိုပြီး ကြားသိရပါတယ်။ စာရေးသူတို့ရွာမှ ဒကာ တစ်ဦးလည်းပဲ အရက်စွဲပြီး အတွင်းကလီစာပျက်ဆီးကာ ပိန်ချုံးချိနဲ့ပြီး သေသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့တော့ မူးယစ်သောက်စား အပြစ်များကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ အရက်သေစာ၊ မူးယစ်ဆေးစတာတွေဟာ သုံးစွဲသူကို မေ့လျှော့စေတတ်တယ်။ မူးယစ်စေတတ်တယ်။ ပက်သဒင်းဆေးရည်၊ တောအရက်၊ မြို့အရက်၊ နိုင်ငံခြားအရက်၊ ထန်းရည်၊ ဓနိရည်၊ ဘိန်းကင်း၊ ကစော်၊ လှော်စာ၊ ဘိန်းဖြူ၊ ဆေးခြောက်၊ ကုတ်ကင်း၊ မာဖီးယား၊ အယ်လ်အက်စ်ဒီ၊ ဘီယာအမျိုးမျိုး စတာတွေဟာ သုရာမေရယ၊ မူးယစ်စေ တဲ့အထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အရက်စတာတွေဟာ မကောင်းတာလုပ်မိဖို့အတွက် ရဲဆေးပါ။ ပင်ကိုယ် အသိစိတ်ရှိနေရင် လူတွေဟာ မကောင်းတာလုပ်ဖို့ လက်တွန့်ကြတယ်။ အရက်လေးဝင်သွားလိုက်ရင်၊ ဒါမှမဟုတ် မူးယစ်ဆေးလေးရှုလိုက်ရင် အရင်က မပြောရဲ တာ ပြောရဲလာတယ်။ မလုပ်ရဲတာ လုပ်ရဲလာတယ်။ ဒါကြောင့် အရက်သေစာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးစတာတွေဟာ သုံးစွဲသူရော၊ သုံးစွဲ သူနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ သူတွေအားလုံးကိုပါ အကျိုးပျက်ဆီးစေပါတယ်။
ဒါကြောင့် အရက်ရဲ့ အပြစ်တွေကို ခုလိုဆိုကြပါတယ်။
“အရက်ဟာ ဆင်ခြင်တုံတရားကို နှင်ထုတ်တယ်၊
ကုစားလို့မရနိုင်တဲ့ အတွင်းအပြင် ဒဏ်ရာတွေကို ဖြစ်စေတယ်၊
ကိုယ်ခန္ဓာကို ဖျက်ဆီးတဲ့ စုန်းမ၊
သူများကျန်းမာဖို့ ဆုတောင်းပြီး ခွက်မြောက်သောက်သူ၊
ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ပဲ ဓားမြတိုက်နေသူ” လို့ဆိုပါတယ်။
အရက်ကို စွဲလမ်းမိလို့ သားအရင်းကိုတောင် သတ်ပြီး အရက်မြည်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဗာရာဏ သီပြည်မှာ အရက်ကြိုက်တဲ့ ဘုရင်တစ်ပါးရှိခဲ့တယ်။ အသားလည်း အစားကြူးတယ်။ အရက်နဲ့အသား၊ အသားနဲ့အရက် သူ့အတွက် မရှိမဖြစ်ပဲပေါ့။ အဲတုန်းကတော့ ဥပုသ်နေ့မှာ အသားမသတ်ရ စည်းကမ်းရှိတယ်။ ဒီတော့ ဘုရင်အတွက် အသားကို ကြိုဝယ်ထား ရတယ်။ တစ်နေ့တော့ ၀ယ်ထားတဲ့အသား ခွေးစားသွားလို့ အရက်သောက်တဲ့အခါ အသားမပါခဲ့ဘူး။ အရက်သာ တစ်အိုးပြီး တစ်အိုးသောက်နေတာ အသားမပါတော့ အရသာမရှိ။ မသိစိတ်က အသားတောင့်တလေတော့ ရင်ခွင်ထဲ ပွေ့ချီထားတဲ့ မွေးကင်းစ သားလေးကို လည်ချိုးကာ ချက်ခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ ကြင်ယာတော်များလည်း မငြင်းသာ။ ငိုချင်ရက်နဲ့ အောင့်ထားရရှာပါတယ်။ ဘုရင်ဟာ တစ်ညလုံး အရက်ကလေးသောက်လိုက်၊ သားလေးရဲ့ အသားကို ဖဲ့စားလိုက်နဲ့ ဇိမ်ကို ရှိနေတာပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ မနက်မိုး လင်းလို့ အမူးပြေတော့ သားလေးကို သတိရတယ်။ ဒါနဲ့ မိဖုရားကို ခေါ် သားတော်လည်းကို ခေါ်ခဲ့ပါဦးလို့ ဆိုတော့ ဒီတော့မှ မိဖုရားများလည်း ညက ဖြစ်စဉ်ကို ပြန်သံတော်ဦးတင်လိုက်ပါတယ်။ ဘုရင်ဟာ မိဖုရားစကားကြားလိုက်တော့ ငယ်ထိပ် မြွေပေါက် ခံရသလို၊ ရင်ဘက် မီးဟုန်းဟုန်းတောက်သလို ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ကာ အိနြေ္ဒမဆည်နိုင်အောင် ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုရပါတော့တယ်။ အမှားဟာ ပြန်ပြင်လို့မရတော့ပါ။ ညက မငိုပဲ အောင့်ထားတဲ့ မိဖုရားနဲ့ နန်းတွင်းသားအားလုံးလည်း ခုမှ အားရပါးရ ငိုကြ ပါလေတော့တယ်။
အဲဒီအချိန်ကစပြီး ဘုရင်ဟာ ဒီလောက် လူကို ဆင်းရဲစေတဲ့အရက်ကို ရဟန္တာဖြစ်တဲ့အထိ မသောက်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အရက်သေစာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုတာ နည်းနည်းသုံး နည်းနည်းမူးတယ်။ များများသုံး များများမူးယစ်လို့ များများအပြစ်လုပ်မိမယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ဆိုကျိုးပေး၊ လူ့အကျင့်စာရိတ္တကိုလည်း ပျက်ပြားစေတဲ့အရက်ကို စာဖတ်ပရိသတ်အားလုံး ရှောင်ကြဉ်နိုင်ကြပါစေ။
အင်ဒိုနီးရှား အိမ်အကူကို ညှဉ်းပန်းမှုဖြင့် ဟောင်ကောင် အမျိုးသမီးတဦးကို ရုံးထုတ်
တရားရုံးအပြင်မှာ ဆန္ဒပြတွေက “အလုပ်သမားတွေ ဖြစ်တယ်၊ ကျွန်တွေ မဟုတ်ဘူး” ဟု ကြွေးကြော်စဉ်
တရားရုံးအပြင်မှာ ဆန္ဒပြသမားတွေက “အလုပ်သမားတွေ ဖြစ်တယ်၊ ကျွန်တွေ မဟုတ်ဘူး” ဟု ကြွေးကြော်စဉ်
ဟောင်ကောင်တွင် အင်ဒိုနီးရှား အိမ်အကူလုပ်သား အတော်များများကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့ အလှဖန်တီးရှင်ဟောင်း လော်ဝမ်တန်ကို ဒီနေ့ တရားရုံးထုတ်လာပါတယ်။
ဒါဟာ ဟောင်ကောင်မြို့အတွင်း နိုင်ငံခြားသား အိမ်အကူလုပ်သား ၃ သိန်းလောက် အတွက် အားကိုးရာ ဖြစ်လာပါတယ်။
အလှဖန်တီးရှင်ဟောင်း လော်ဝမ်တန်ဟာ အိမ်အကူ အတော်များများကို ဒဏ်ရာရစေမှု၊ စော်ကားမှုနဲ့ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေအပါအ၀င် စွဲချက် ၇ ချက်ကို ရင်ဆုိုင်နေရပါတယ်။
သူမရဲ့ အိမ်အကူတွေထဲက အင်ဒိုနီးရှားအိမ်အကူ အာဝီယာနာရဲ့ အမှုကတော့ ဒီနှစ် အစောပိုင်းမှာ လူသိရှင်ကြား ဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇန်န၀ါရီလက သူ့ကို ဖမ်းပြီး အာမခံနဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက် မေ ၂၀ ရက်နေ့မတိုင်မီအထိ အမှုကို ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။
တရားရုံးအပြင်မှာတော့ ဆန္ဒပြသူ အယောက် ၂၀ လောက်က “အလုပ်သမားတွေ ဖြစ်တယ်၊ ကျွန်တွေ မဟုတ်ဘူး” လို့ ကြွေးကြော်နေကြပါတယ်။
ဒီအမှုဟာ ဟောင်ကောင်လို တရားဥပဒေစိုးမိုး လိုက်နာတဲ့နေရာမှာ ဖြစ်ခဲ့တာ အံ့သြစရာပဲလို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ (amnesty international)ရဲ့ အာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူး ရောဘတ်ဂေါ့ဒန်က ပြောပါတယ်။
တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းကတော့ အင်ဒိုနီးရှားအိမ်အကူ အာဝီယာနာကို ကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံး လူ အယောက် ၁၀၀ စာရင်းမှာ ထည့်သွင်းခဲ့ပြီး အခွင့်အရေးအတွက် ပြန်တိုက်တဲ့ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဆရာ Snake bite အကြောင်းရေးပါအုံးခင်ဗျား။
India national snake-bite protocol in 2007 အိန္ဒိယ မြွေကိုက်ခြင်းလိုက်နာရန်အချက်များ ၂ဝဝ၇
ကနေ့လို ဒိဂျစ်တယ်လ်ကာလမှာ ဆဲလ်ဖုန်းကနေလဲ ရှေးဦးသူနာပြုနည်း၊ ပတ်တီးစည်းနည်း၊ မြွေဆေးရတဲ့နေရာ၊ စတာတွေကို ချက်ချင်း ရှာဖွေကြည့်နိုင်လို့ နည်းပညာရဲ့အကျိုးကိုရယူပါလေ။
ကားမီးလောင်ရာတွင် ပါသွားသည့် သန်းခေါင်စာရင်း စာရွက်များ အသစ်ပြန်ကူးနေပြီ
ကားမီးလောင်ရာတွင် ပါသွားသည့် နောင်တရားမြို့နယ်မှ သန်းခေါင်စာရင်းစာရွက်တချို့ ပျက်စီးသွားသဖြင့် အသစ်ပြန်လည် ကူးယူနေသည်ကို ဧပြီလ ၂၉ ရက် နံနက်က တောင်ကြီးခရိုင် လဝကရုံးတွင် တွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ- ဂျွန်ချစ်ငြိမ်း)
တောင်ကြီး၊ မဇ္ဈိမ။ ။ကားမီးလောင်ရာတွင် ပါသွားသည့် နောင်တရားမြို့နယ်၏ သန်းခေါင်စာရင်း စာရွက်စာတမ်းအချို့ကို စက်ဖတ်၍ မရနိုင်တော့သဖြင့် အသစ်ပြန်လည်ကူးနေပြီဟု တောင်ကြီးခရိုင် လဝက ဒု-ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူး ဦးရဲနောင်က ဧပြီ ၂၉ရက်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဧပြီလ ၂၈ရက် နံနက်က တောင်ကြီးမြို့သို့ တက်မည့် အတက်လမ်းတွင် ပရိုဘောက်ကားတစ်စီး မီးလောင်ခြင်းကြောင့် ကားပေါ်တွင်ပါသည့် နောင်တရားမြို့နယ်အတွက် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခံထားသည့် စာရွက်အချို့ ၁၀ရာခိုင်နှုန်း ပျက်ဆီးသွားသည်ဟု ခန့်မှန်းပြောဆိုခဲ့သော်လည်း အမှန်တကယ် စိစစ်ခွဲထုတ်၍ သန့်ရှင်းရာတွင် ပျက်ဆီးမှုပမာဏမှာ ၎င်းပမာဏထက်လျော့နည်းသည်ဟု ဦးရဲနောင်က ဆိုသည်။
အသစ်ပြန်လည်ကူးယူနေသည့် သန်းခေါင်စာရင်းစာရွက်များကို တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ ပြည်နယ် မှ လ၀က ၀န်ထမ်းများဖြင့်သာ ပြန်လည်ကူးယူနေခြင်းဖြစ်ပြီး ဧပြီ ၂၉ ရက် တစ်ရက်တည်းဖြင့် ပြီးစီးနိုင်သည်ဟု တောင်ကြီးခရိုင် လ၀က ဒု-ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူး ဦးရဲနောင်က ဆိုသည်။
အသစ်ကူးယူပေးထားသည့် သန်းခေါင်စာရင်းဆိုင်ရာစာရွက် နှင့် နှုတ်ခမ်းသားများမီးလောင်သွားသည့် သန်းခေါင်စာရင်းစာရွက် မူရင်းတို့ကို ပြန်လည် စစ်ဆေးသည့်အခါ ကွဲလွဲမှု မရှိစေရန် အတွက် အဆိုပါ နှစ်ခုလုံးကို နေပြည်တော်သို တွဲ၍ ပေးပို့ပေးသွားမည်ဟု တောင်ကြီးခရိုင် လ၀က ဒု-ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူး ဦးရဲနောင်က ပြောသည်။
ယခု မီးလောင်မှုကြောင့် အသစ်ပြန်လည်ကူးယူပေးနေသော သန်းခေါင်စာရင်း စာရွက်များသည် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ နောင်တရားမြို့နယ်ခွဲ အမှတ် (၁) ရပ်ကွက် မှ ကောက်ကွက် ၅ကွက်၊ ပုန်းအိမ်အုပ်စု ကောက်ကွက် ၄ကွက်၊ မြင်းတွင်း ၄ကွက်၊ နောင်ပီ ၂ကွက်၊ ဘုရားဖြူ ၂ ကွက် နှင့် ဘန့်ပြင် ၁ကွက် စုစုပေါင်း ကောက်ကွက် ၁၈ကွက်မှ ခန့်မှန်း သန်းခေါင်စာရင်းဆိုင်ရာ စာရွက်ရေ (၁၀၀၀) ဖြစ်သည်ဟု တောင်ကြီး ခရိုင် ဦးစီးဌာန၏ မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
ခြင်၊ ယင်၊ ပိုးဟတ်တွေကို နေ့စဉ်လိုက်လံနှိမ်နှင်းပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးရှိအောင် လိုက်လံပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ ချီးကျူးလေးစားဖွယ် အသက် ၈၀ အရွယ် ဘွားဘွား
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟန်ဇူးမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ အသက်(၈၀) နှစ်အရွယ်ရှိ ရူအန်တန် အမည် ရှိတဲ့ အဘွားအိုဟာ အသက်ရှင်နေစဉ် ကာလ အတွင်းမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးရှိစေမယ့် အလုပ်တစ်ခု လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ် ခဲ့ပါတယ်။ ရူအန်တန်ဟာ အလုပ်တစ်ခု ကနေ အနားယူပြီးတဲ့နောက် ပြီးခဲ့တဲ့ (၁၄)နှစ်တာ ကာလအတွင်း နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပတ်ဝန်းကျင် ကို အကျိုးရှိစေမယ့် အလုပ်တစ်ခုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ပတ်ဝန်း ကျင်မှာရှိနေတဲ့ ခြင်၊ ယင်၊ ပိုးဟတ်တွေကို လိုက်လံနှိမ်နင်းခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရူအန်တန်ဟာ တစ်နေ့ကို ခြင်၊ ယင်၊ ပိုးဟတ်(၁၀၀၀)ကျော်ကို နှိမ်နင်းလေ့ရှိ ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ရာမှာ တစ်နေ့ကို ရှစ် နာရီခန့် အချိန်ယူရလေ့ရှိတယ်လို့ သိရပါ တယ်။ ရူအန်တန်ဟာ ခြင်၊ ယင်၊ ပိုးဟတ် တွေကို နှိမ်နင်းတဲ့ ရိုက်တံ လေးကို ကိုင်ဆောင်ပြီး မြို့အနှံ့လျှောက်သွားကာ နှိမ်နင်းနေ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ ကလည်း ရူအန်တန်ရဲ့ အပြုအမူကို ချီးကျူးခဲ့ကြ သလို တရုတ် မီဒီယာ တွေကလည်း တခမ်းတနား ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ ရူအန်တန်က ကျွန်မအလုပ်ကနေ အနားယူပြီးတဲ့နောက်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လိုအကျိုးရှိအောင် လုပ်ပေးမလဲဆို တာ စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတတ်နိုင် တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခြင်၊ ယင်၊ ပိုး ဟတ်တွေကို နှိမ်နင်းတာဟာ ကျွန်မနဲ့ အကိုက်ညီဆုံး အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်ကို နေ့စဉ် လုပ်နေပါတယ်”” လို့ ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်မီဒီယာ တွေကတော့ ရူအန်တန်ဟာ ပြည်သူတွေ အတွက် ရောဂါဘယတွေ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ခြင်၊ ယင်၊ ပိုးဟတ်တွေကို နှိမ်နင်းမှုပြုလုပ်နေကြောင်း ကို ရေးသားဖော်ပြမှုတွေ မကြာခဏ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရူအန်တန် ကလည်း အိမ်နီးနားချင်းတွေကို ကူညီခွင့်ရလို့ ဂုဏ်ယူမိကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ အိမ်နီးနားချင်း ဖြစ်သူ အသက် (၅၈) နှစ် အရွယ်ရှိ ဂျီအမ်က လည်း ရူအန်တန်ဟာ ပျံသန်းနေတဲ့ အင်းဆက် ပိုးမွှား တွေကို နှိမ်နင်းရာမှာ အလွန်ကျွမ်းကျင်ကြောင်း ချီးကျူးစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဤတွင် ထိုသူသည် ဆရာကြီးသင်ပေးလိုက်သည့် "မစူးစမ်း မဆင်ခြင် မပြုရာ" ဟူသော စကားကို သွား၍ သတိရပြန်သည်။ နောက်ဆုံး စုံစမ်းမေးကြည့်တော့မှ ၁၃ နှစ်သားက ထား ဒကာတော်ရေမြေ့ရှင်လည်း အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တတည်းဟူသော လက္ခဏာရေးသုံးပါးကို ပွားများပြီးသာနေပါ" ဟု ဗန်းမော်ဆရာတော်က မင်းတုန်းမင်းကြီးအား မိန့်ကြားပြောဆိုလေရာ မင်းတရားကြီးမှာ များစွာကျေနပ်သွားလေတော့သည်။
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၂၈ ။
၂၀၁၄ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲလစ်လပ် မဲဆန္ဒ ၃၁ တစ်နေရာတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ချင်သော်လည်း ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်
မှတ်ပုံတင်မရရှိသေးသည့်တွက်ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ရန်ခက်ခဲနေလျက်ရှိကြောင်းဧပြီ ၂၈ ရက်နေ့ကသိရသည်။
“အကိုတစ်ယောက်ထဲမရတာတော့ မဟုတ်ဘူး ပြန်လာတဲ့သူတွေအကုန်မရသေးဘူး။ မှတ်ပုံတင်က ပြန်လျှောက်ထားပြီးပြီအကိုတို့က
နိုင်ငံသားတွေပါ မှတ်ပုံတင်ကို ပြန်ထုတ်ပေးပါ။ ဒါမရရင် အကိုအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ဖို့အတွက် ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရဘူး ” ဟု
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအခြားနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူထားသူသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရွေးကောက် ပွဲတွင် ယှဉ်ပြိ်ုင်ခွင့်မရှိပဲ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၀နှစ်ကျော်အခြေချနေထိုင်သူဖြစ်မှသာ ရွေးကောက်ပွဲအားဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းသိရသည်။
“၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့ မပြင်ပေးဘူးဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းသမ္မတလုပ်လို့မရသလို၊ငါတို့လည်း
အမတ်လုပ်လို့မရဘူး။ငါတို့ကို ပြန်ခေါ်ထားပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုရင် ငါတို့လမ်းမထွက် ဆန္ဒပြရတော့မယ် ” ဟု
အမည်မဲစာရင်းပယ်ဖျက်ပေးခြင်းနှင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အခြားနိုင်ငံသားခံယူထားသော မြန်မာနိုင်ငံသားများအားမှတ်ပုံတင်
ပြန်ထုတ်ပေးခြင်းအခွင့်အာဏာသည်နိုင်ငံတော် သမ္မတထံတွင် သာရှိပြီးမိုးသီးဇွန်အနေဖြင့် မှတ်ပုံတင် ပြန်လိုချင်ပါက နိုင်ငံတော်
သမ္မတထံသာတိုက်ရိုက် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထွန်းထွန်းဦး
သမ္မတထံသာတိုက်ရိုက်လျှောက်ပါ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတက လုပ်ပေးပါလို့ ကျွန်တော်တို့ ကိုပြောလာရင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လုပ်ပေးမှာပါ “ဟု
၂၀၁၄ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအားအောက်တိုဘာလတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီးမိုးသီးဇွန်သည် လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအားဝင်ပြိုင်ခွင့်
ရရှိခဲ့ပါက တသီးပုဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သာ ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ခရိုနီသူဌေးကြီး နဲ့လွှတ်တော်အမတ်ကြီးလည်းဖြစ်သူ ဦးဘ က အနှစ်(၄၀)မြောက်
မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ညမှာ သူ့ဇနီး ဒေါ်မြကို မေးသတဲ့။
“ မြရေ။ ကိုတို့ အိမ်ထောင်သက် နှစ်၅၀ တွင်းမှာ မင်းတာဝန်
ကျေပွန်ခဲ့ပါတယ်ကွာ။ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်။ ကို တစ်ခုမေးချင်တယ်။ မင်း
တခြားသူနဲ့များ ကျူးလွန်ဖူးသလားဆိုတာ အမှန်အတိုင်းပြောပြပါလား။ ကို
လုံးဝအပြစ်မယူပါဘူး။ သိချင်ယုံပါ ”
“ အင်းလေ ကိုမေးတော့လည်းပြောရတာပေါ့။ ၃ ခါထဲပါ။ ”
“အင်း…. ပထမ တစ်ခါက ဘယ်သူနဲ့လဲ”
“ကို အသက်၃၅နှစ်မှာ ကို့ကုမ္ပဏီလေး အရှံးပေါ်ပြီး ရောင်းရမလိုဖြစ်တော့
အကြီးအကဲတစ်ဦးရောက်လာပြီး လိုသလောက်ငွေတွေ ချေးပေးခဲ့တာ မှတ်မိသေးလား”
“အော်ဒါလား မြ ကို့ကြောင့် အနစ်နာခံခဲ့ရတာပဲ၊ ကို အပြစ်မတင်တဲ့အပြင်
“ကို အသက် ၄၅နှစ်မှာ နှလုံးရောဂါဖြစ်တော့၊ ခွဲစိတ်ရင်လည်း
အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ဘယ်ဆရာဝန်မှ နာမည်ပျက်ခံပြီး
မခွဲချင်ကြဘူးလေ၊ နောက်ဆုံး ဆရာဝန်ကြီး တစ်ယောက် စိတ်ပြောင်းပြီး
“အော်ဒါလည်း မြ အနစ်နာခံခဲ့တာပဲလား ကျေးဇူးတင်လိုက်တာမြရယ်၊ နောက်ဆုံး အခေါက်ကရော”
“ကို အသက် ၅၅ နှစ်မှာ ပထမဆုံး အကြိမ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်တော့ ကြိုတင်မဲ ၃၅၀
ရခဲ့တာ မှတ်မိသေးလား……. ”
ကြားဖူးနားဝ ပုံပြင်လေးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အင်မတန်မှ မြှောက်တတ်ပင့်တတ် ဖားတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက် ငရဲပြည်ကို ရောက်လာပါသတဲ့။ ဒီလူကို ယမမင်းကြီးရဲ့ ရှေ့တော်မှောက် မသွင်းခင်မှာ ယမမင်းကြီးရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိက ယမမင်းကြီးကိုကြိုပြီး သံတော်ဦးတင်ထားတယ်။
“အရှင်ယမမင်းကြီး၊ အဲဒီလူဟာ အင်မတန်မှ မြှောက်တတ်ပင့်တတ် ဖားတတ်တယ်။ လူ့ပြည်မှာ သူ့ကြောင့်လူတွေအများကြီး ဒုက္ခရောက်ခဲ့ ကြရပါတယ်။ အရှင်ယမမင်းကြီး ကြိုတင်သိပြီး သတိထားနိုင်အောင် လျှောက်ထားအပ်ပါတယ်”
“အေး ကောင်းပြီ။ ရှေ့တော်သွင်းစေ”
အဖားဝိဇ္ဇာ ပါရဂူ ၀င်လာတယ်။ ယမမင်းကြီးကို လက်အုပ်ချီကန်တော့ပြီး အံ့အားသင့် နှစ်သက်သဘောကျ မြတ်နိုးကိုးစား ယုံကြည်မှုတွေ ဖော်ပြရင်း ယမမင်းကြီးကို လျှောက်ထားတယ်။
“လူ့ပြည်မှာ ကြားခဲ့ရတဲ့ သတင်းနဲ့ ငရဲပြည်မှ အခုမြင်ရတဲ့ အဆင်းက တခြားစီပါလား ဘုရား။ ယမမင်းကြီးကို ရက်စက်ယုတ်မာ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ သတ္တ၀ါကြီး ထင်မှတ်မှားခဲ့တာ အခု မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ရတော့မှ မှားမှန်းသိတယ် ဘုရား။ ချောမောခန့်ညား ကြည်ညိုစရာ ကိုယ်တော်ကြီးပါတကား”
ကိုယ်ရေးအရာရှိ အံ့အားသင့်သွားတယ်။ ဒီလူ တယ်အတင့်ရဲလှပါလား။ ရောက်တာနဲ့ မြှောက်ပါပကော။ ငါ့အရှင်ကလည်း သဘောကျနေပုံပဲ။ စောစောစီးစီး ရှင်းထားမှ။ တော်နေကြာ အနားခေါ်ထားပြီး အပါးတော်မြဲ ခန့်လိုက်ရင် ငါနေရာပျောက်ရချည်ရဲ့ဆိုတွေးပြီး လျှောက်ရဲ့။
“အရှင်ယမမင်းကြီး ဒီလူအရှင့်ကို မြှောက်နေပြီဘုရား။ သတိပေးစကား လျှောက်ထားအပ်ပါတယ် ဘုရား” ယမမင်းကြီးက ဘ၀င်မကျတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိကို စူးစိုက်ကြည့်တယ်။ အလိုမကျသံ လွှမ်းနေတဲ့ လေသံမာမာနဲ့ ဟောက်တယ်။ “ဟကောင်ရ ဒါကတော့ အမှန်ပြောတာလေကွာ။ ပြောပါစေ”
အမှန်တရားဆိုတာ အသံကြားတာနဲ့ နားခါးတယ်တဲ့ ဗာလာနံတွေက ပြောကြတယ်။
ဘုတ်ကိုကျီးကမြှောက်၊ ကျီးကိုဘုတ်ကမြှောက်နဲ့ ဟုတ်နေတဲ့ လောကကြီးထဲမှာ ဖြစ်ရပ်မှန်ပုံပြင်တွေ စာတင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်လေးတစ်ယောက် ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ မျက်နှာပေးချိုချိုနဲ့ အသံလေးချိုချိုနဲ့ အင်မတိ အင်မတန်မှ ပေါင်းတတ်သင်းတတ်တာကလား။ သူ့အတွက်များ အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်၊ သူ့ကိုမစနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဆိုရင် ဖားချက်က ကမ်းကုန်တယ်။ ကြုံဖူးတာလေးတစ်ခု ပြောပါတယ်။
“ကျွန်တော်ဗျာ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ပြောစကားကြားတော့ အရမ်းကို လေးစားသွားတယ်။ တစ်ခါမှ မကြားဖူးဘူးဗျာ။ သူပြောမှ ကြားဖူးတာ။ လုပ်စရာအလုပ်ကို ချက်ချင်းလုပ် အကြွေးမထားနဲ့တဲ့။ သြော် ဒါ့ကြောင့် သူကြီးပွားအောင်မြင် နေတာကိုးလို့ အောက်မေ့မိတယ်” တဲ့။ သူပြောတဲ့ စကားတွေနော်။ ခဏခဏ ပြောတယ်။
အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီး နားပေါက်နိုင်တဲ့ နေရာတွေဆိုရင် ပြောပြီ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကြားမှာဆိုရင် ပြောပြီ။ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး နာမည်တပ်ပြီး ပြောတာ။ ဒီစကားတွေက အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနားကို ပြန်ရောက်တာပေါ့။ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလဲ သဘောကျတာပေါ့။ ပုဂ္ဂိုလ်လေးကလည်း ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆီမှာ မျက်နှာသာ ပေးခံရတယ်။
ဒီလိုသားမျိုး မွေးထားတဲ့ မိဘတွေ၊ တပည့်တော်ခဲ့တဲ့ ဆရာတွေမှာ ဘယ်လောက်ရှက်ရှာမလဲ။ ဒီနေ့အလုပ်ကို မနက်ဖြန်မရွှေ့နဲ့ဆိုတဲ့ စကားတွေ ဆရာမိဘများ ပြောနေကျလေ။ အဲဒါကို သူ့အဘပြောမှ ကြားဖူးရတယ်ဆိုတော့ မွေးရကျိုး၊ သင်ရကျိုးနပ်လေခြင်းဆိုပြီး ငိုချင်းချဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်။
နောက်တစ်ယောက် ရှိသေးဗျ။ နေရာတကာမှာ တွေ့မြင်ရတတ်တဲ့ ဆရာတကာ ရေးတတ်တဲ့စာကို ငါ့ဆရာ ရေးခဲ့တာဆိုပြီး မှတ်ပုံတင် တံဆိပ်ကပ်တာ။ ဆရာသုံးပါး သင်ကြားသမျှ နာယူမှတ်သား ခဲ့တာတွေကို ပြန်ပြီးရေးကြ ပြောကြတာ မဟုတ်လားဗျ။
ဂေါက်သီးကစားတယ်ဆိုတာ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ကျင့်ဝတ်နဲ့ အင်မတန်မှ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကစားနည်းမို့ လူကြီးလူကောင်း ကစားနည်းလို့ ဆိုကြပါတယ်။ အဲဒီ လူကြီးလူကောင်း ကစားနည်းဟာ လူကြီးလူကောင်းဖားနည်း ဖြစ်သွားတာကတော့ မဟာပံသု မြေလွှာထုမှာ ဒီတစ်နေရာပဲ ရှိမယ်ထင်ရဲ့။
၁၉၉၀ စွန်းစနှစ်မှာပါ။ တိုင်းကြီးသခင်အဘ တိုင်းခန်းလှည့်ကြွလာရင်း မြို့တစ်မြို့ ရောက်ပါတယ်။ ညနေပွဲအတွက် ကြိုတင်လက်သွေးမယ်ဆိုပြီး ဂေါက်သီးရိုက် ကျင့်ပါရော။ မြို့ခံအကြီးအကဲရော ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိကြီးများပါ ၀ိုင်းကြည့်ပြီး အားပေးကြတယ်။ ရိုက်ချက်တွေက ကွေးတိကွေးကောက်နဲ့ စိတ်ပျက်ပြီး သေလောက်တယ်။ ဂေါက်သမားအခေါ် Banana Shot တွေဗျာ။ အဲဒါကို ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကထပြီး ချီးမွမ်းစကားဆိုတယ်။ ကောင်းလိုက်တဲ့ Golden Banana Shot အဘရယ်တဲ့။
ညနေရိုက်တော့ရော။ အဲဒီအဘရိုက်တာ ပျက်သွားရင် အစားရိုက်ခွင့် ပေးတယ်။ လေးငါးချက်လောက်ရိုက်ပြီး အကောင်းဆုံးကို ယူတယ်။ ကျင်းစိမ်မြက်ခင်းပြင် (Green) ပေါ် ဘောလုံးရောက်တာ ON တာနဲ့ အဘလက်နဲ့ဆို ၀င်ပါတယ်ဆိုပြီး ပေးတယ်။ ဘယ့်နှယ်ဗျာ ကမ္ဘာ့ထိပ်သီး ဂေါက်သီးအကျော်အမော်တွေတောင် တစ်ပေလောက်လွဲလို့ ချန်ပီယံဖလားနဲ့ ဝေးခဲ့ကြရတာများပေါ့။ (အဲဒီပေးတဲ့လူတွေပဲ အဲဒီအဘရာထူးက နားလဲပြီးရော မရဘူး၊ မပေးဘူး၊ ကိုယ့်ဘာသာ ကြိုးစားပြီး ကျင်းဝင်အောင်သွင်း လုပ်ကြတာ။)
နံပါတ် ၁၃ ကျင်းရောက်တော့ အဲဒီအဘ ဘောလုံးက အတော်ကြီးဝေးနေတော့ မပေးသာတော့ဘူး။ အဘကျင်းစိမ်ရိုက်ချက် ရိုက်ခါနီးမှာ အဲဒီမြို့က အဖားဝိဇ္ဇာဆရာလေး ထလာတယ်။ “အဘ အဘ ခဏလေး” ဆိုပြီး ကျင်းစိမ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အမှိုက်ရောက်နေလို့ဆိုပြီး ကုန်းမှုတ်တယ်။ ဘာရှိလို့လဲဆိုတော့ ဖွဲပြာစ သေးသေးလေး ရောက်နေလို့တဲ့။ ပရိသတ်ထဲက အသံထွက်လာတယ်။ “ကုန်းများမှုတ်နေရသေးကွာ၊ ကုန်းပြီးလျှာနဲ့လျက်လိုက်ရင် ပြီးရော” တဲ့။ သံတူကြောင်းကွဲ ဂေါက်ကွင်းဇာတ်လမ်းတွေ၊ ဖြစ်ရပ်မှန် ပုံပြင်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ပြောလက်စနဲ့ မထူးတော့ပါဘူး။ သူများအကြောင်းရေးရင် ပြဿနာရှိနိုင်တာမို့ ကိုယ့်အမျိုးထဲက သွားလေသူ ဘိုးကြီးဘေးကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခု ပြောပါရစေ။
အဲဒီဘိုးဘိုးကြီးက သီပေါမင်း ပါတော်မမူခင်ကတည်းက လူဖြစ်ခဲ့တာ ဆိုပေမယ့် အောက်ပြည်အောက်ရွာကဆိုတော့ မျက်နှာဖြူ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ တောက်လျှောက်နေခဲ့ရတာ။ ရုပ်ကလေးကသန့်ပြီး ဘိုလိုရွှတ်ရှက်နွတ်ဒက်ကလည်း ကောင်းကောင်းမှုတ်တတ်တော့ အင်္ဂလိပ်ကုန်သည်ကြီး တစ်ယောက်က စပါးအ၀ယ်တော် ခန့်လိုက်တာဗျာ။ ဒါနဲ့ တစ်ရွာတစ်ကျီဆောက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
သောက်တော်ဘူးကိုယ်မကွာ ပျိုကညာ ထည်လဲနဲ့ မယားယူပွဲကြီး ကျင်းပခဲ့တယ်။ လခနဲ့ ကော်မရှင်အပြင် စပါးပေါ်ငွေပေး ဈေးနှိမ်အကြွေးဖြတ်လို့ရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေက တနင့်တပိုးရယ်။ ရုပ်ကလဲချော ဥစ္စာကလည်းပေါတော့ အဲဒီခေတ် အဲဒီအခါအလျောက် ရယူခံစားနိုင်သမျှသော လောကီစည်းစိမ်တွေ ခံစားခဲ့သပေါ့။ မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီး မဟုတ်တာတွေကြားမှာ ပျော်ပါးရင်း အချိန်တွေကုန်ခဲ့တာ။ ပြစရာဆိုလို့ ရွာထိပ်က ဇရပ်ကြီးနဲ့ ဘုရားတည်ခဲ့တာပဲ ကျန်ရဲ့။
တစ်ရက်သားမှာတော့ ဘယ်ကရောက်လာမှန်း မသိရတဲ့ ငမူးငရူး တစ်ယောက်ပေါ့ဗျာ၊ ဘိုးဘိုးကြီးရဲ့အလှူ ကမ္ပည်းစာတွေဖတ်လိုက်၊ သူမြင်တောင် မမြင်ဖူး ကြားတောင်မကြားဖူးတဲ့ ဘိုးဘိုးကြီးရဲ့ ဂုဏ်တွေကို အမွှန်းတင်လိုက်နဲ့။ သူတော်ကောင်းကြီးပြောလိုက်၊ သာသနာပြု ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုလိုက်၊ ဘုရားဒါယကာကြီးတလိုက်နဲ့ ကြာတော့ ရွာကအမျိုးတွေ နားကလောလာတယ်။
“သေသွားခဲ့ပြီးသားလူကို မဟုတ်ကဟုတ်က လာဖားလို့ ဘာမှမစားရ မသောက်ရဘူး၊ နားလည်လား ငမူးရဲ့ သွားစမ်း” ဆိုပြီး မောင်းထုတ်တဲ့ဘ၀ ရောက်ပါရော။
ကိုယ်ကပဲ မတော်မတည့်တွေ မြင်မြင်နေတတ်တာလား။ လောကကြီးကပဲ မတော်မတည့်တွေ များနေသလား။ တစ်ခုထက်မကများ မှားနေရော့သလား။
ရူးအောင်လည်း မြှောက်တတ်ကြတယ်။ မျက်နှာပြောင်နဲ့ မသိချင်ဟန်လည်း ဆောင်တတ်ကြတယ်။
ဟေးဆိုတဲ့အသံနဲ့ ပြေးလွှားသွားကြတဲ့ ၀တ်ကောင်းစားလှတွေနဲ့ လူအုပ်ကြီးကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ စတုဒိသာစားဖို့ အရေးတော့ဖြင့် ဒီလောက်မပြေးတန်ရာလို့ အောက်မေ့မိတယ်။ အလားအလာရှိသူ တစ်ယောက်ထံပါး ရွှေနားတော်သွင်း ဘုန်းတော်ဘွဲ့ တေးချင်းတွေ ဆက်သဖို့ နေရာမရမှာစိုးလို့ ဆိုပဲ။
သူတစ်ထူးရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ဖော်ကျူးတယ်၊ ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာ မင်္ဂလာရှိတဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်ရှိတဲ့ ရေမရောတဲ့ဂုဏ် ဆိုရင်တောင်မှ အလွန်အကြူး မဖွဲ့မိရလေအောင် သတိဆောင်ရပါမယ်။ သတိထားသင့်ပါတယ်။ ပညာရှိ သူတော်ကောင်းကြီးများဟာ ဒီလိုမြှောက်ပင့် ချီးမွမ်းခြင်းမျိုးကို မနှစ်သက်ကြပါဘူး။ သူယုတ်သူမိုက်သည် သူတော်ကောင်းပညာရှိကို ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့် ဖျက်ဆီးတတ်၏တဲ့။
ဒီစာကို နှစ်သစ်ဆောင်စရာ သံပေါက်နဲ့ နိဂုံးချုပ်ပါရစေ။
လူကြီးများ မြှောက်ပင့်ဖားဘေးမှ ကင်းဝေးကြပါစေ။
ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ကိုကျော်နိုင်ဦး (ဓာတ်ပုံ – ရွှေလုပ်သား)
လမ်းအကွေ့၌ အရှိန်မထိန်းနိုင်သောယာဉ် တံတားဘောင်အားတိုက်မိတိမ်းမှောက်၍ သေဆုံး/ဒဏ်ရာရ
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီခွဲအချိန် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၅၂/၁-၂)ကြားတွင် ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းအရ ဘောနီအမြန်လမ်းရဲစခန်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များက သက်သေများနှင့်အတူ သွားရောက်စစ်ဆေး ခဲ့သည်။ စစ်ဆေးချက်အရ ရန်ကုန်မှမန္တလေးသို့ ရှမ်းပြည်နယ်၊ နောင်ချိုမြို့၊ ဘူတာလမ်းနေ ဇော်မင်းလေး(၃၃)နှစ်မောင်းနှင်လာသည့် 6G/xxxx မစ်ဆူဘီရှီအပြာရောင်ယာဉ်သည် လမ်းအကွေ့၌ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ တံတားဘောင်စွန်းအားတိုက်မိပြီး လမ်းမပေါ်သို့ လဲကျတိမ်းမှောက်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ထိုသို့တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် ဇော်မင်းလေးနှင့် ယာဉ်ပေါ်တွင်လိုက်ပါလာသူများအနက် နောင်ချိုမြို့နယ်၊ သဖန်းကိုင်းကျေးရွာနေ ဒေါ်စန်း(၅၁)နှစ်ပါ ကျား ၄ ဦး၊ မ ၉ ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၃)ဦးတွင် ဒဏ်ရာများအသီးသီးရရှိခဲ့သဖြင့် ပဲခူးဆေးရုံသို့တင်ပို့ကုသခဲ့ရာ ဒေါ်စန်းမှာ ဆေးရုံသို့ အရောက်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းနှင့် ယာဉ်မဆင်မခြင်မောင်းနှင်သူ ဇော်မင်းလေးအား ဘောနီ အမြန်လမ်းရဲစခန်း ယာဉ်(ပ)၆/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၀၄-က/၃၃၇/၃၃၈ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူ ထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
(၂) ၃ လမှ ၁၁ လ ကလေးငယ်တွေ အတွက် တစ်နေ့ကို ၁၃ နာရီမှာ ၁၆ နာရီ အိပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
(၃) ၁ နှစ်မှ ၃ နှစ် ကလေးငယ်တွေ အတွက် တစ်နေ့ကို ၁၂ နာရီမှ ၁၄ နာရီ အိပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
(၄) ၅ နှစ်မှ ၁၂ နှစ် ကလေးတွေ အတွက် တစ်နေ့ကို ၁၀ နာရီမှ ၁၁ နာရီ အိပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
(၅) ၁၃ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်တွေ အတွက် တစ်နေ့ကို ၉ နာရီမှ ၁၀ နာရီ အိပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
(၆) ၁၈ နှစ်အထက် ကတော့ တစ်နေ့ကို ၇ နာရီမှ ၉ နာရီထိ အိပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
မန်နေဂျာ ရာထူးအတွက် လူးဝစ်ဗန်ဂါးကို ပေါင် ၂၅ သန်းတန် သုံးနှစ်စာချုပ်ဖြင့် ယူနိုက်တက် ချုပ်ဆိုဖွယ်ရှိ
နယ်သာလန် နည်းပြ လူးဝစ်ဗန်ဂါးသည် ယခု ရက်သတ္တပတ် အတွင်း မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်၏ မန်နေဂျာသစ် ဖြစ်လာဖွယ်ရှိပြီး ၎င်းအနေဖြင့် ပေါင် ၂၅ သန်းတန် သုံးနှစ်စာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးရန် အသင့်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် ဗန်ဂါးသည် ၎င်း၏ နည်းပြအဖွဲ့ဝင်ကို အိုးထရတ်ဖို့ဒ်သို့ ခေါ်ဆောင်လာဖွယ် ရှိသော်လည်း ယူနိုက်တက်၏ ယာယီ မန်နေဂျာ ရိုင်ယန်ဂစ်ကို နည်းပြအဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ခန့်အပ်သွားဖွယ် ရှိသည်။ ဒေးဗစ်မိုယက်စ် ထုတ်ပယ် ခံရပြီးနောက် ပရီးမီးယားလိဂ် လက်ကျန် ၄ ပွဲကို တာဝန်ယူ ကိုင်တွယ်နေသည့် ရိုင်ယန်ဂစ်သည် ၎င်း၏ ပထမဦးဆုံး ပွဲစဉ်တွင် နော်ဝစ်ခ်ျကို ၄-၀ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး အိမ်ကွင်း ပရိသတ်များအား ကျေနပ်မှု အပြည့် ရရှိစေခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ယူနိုက်တက်မှ တာဝန်ရှိသူများက အမြဲတမ်း မန်နေဂျာ ရာထူးအတွက် ဂစ်ကို အာမခံ ထားခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
အသက် ၆၂ နှစ်အရွယ် ဘာစီလိုနာနှင့် ဘိုင်ယန်မြူးနစ် နည်းပြဟောင်းသည် ယခုတစ်ပတ် အတွင်း ယူနိုက်တက်နှင့် သဘောတူညီမှု ရရှိရန် စိတ်အားထက်သန်နေကြောင်း၊ သို့မှသာ ဘရာဇီးလ်တွင် ကျင်းပမည့် ကမ္ဘာ့ ဖလားပြိုင်ပွဲ အတွက် နိုင်ငံအသင်းအပေါ် အပြည့်အဝ အာရုံစိုက်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှ စိတ်ဝင်စားနေသည့် မန်နေဂျာများတွင် ကာလို အန်ဆယ်လော့တီ ပါဝင်သော်လည်း ၎င်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သည် အေးဂျင့်မလိုသည့် ဗန်ဂါးထက် ပိုမိုကုန်ကျမည် ဖြစ်ပြီး ၎င်းကိုယ်တိုင်ကလည်း ရာသီကုန်တွင် စပိန်ထိပ်သီးကလပ်မှ ထွက်ခွာဖွယ် မရှိသောကြောင့် ဗန်ဂါးသာ မန်နေဂျာသစ် ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
အကယ်၍ လူးဝစ်ဗန်ဂါးကို မန်နေဂျာအဖြစ် ခန့်အပ်ပြီးခဲ့ပါက ယူနိုက်တက် အနေဖြင့် ဆောက်သမ်တန်မှ လုခ်ရှော၊ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်မှ တိုနီခရူးစ်၊ ဘိုရပ်ရှားဒေါ့မွန်မှ မာကိုရူးစ်နှင့် ပေါ်တိုမှ အီလီယာကွင်မ် မန်ဂယ်လာတို့ကို ခေါ်ယူရေး အတွက် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ဖွယ်ရှိသည်။
တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆွေးနွေးပွဲ မေလတွင် ပြုလုပ်နိုင်မည်
တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (အန်စီစီတီ) အဖွဲ့ရဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ရွှေဆိုင်းလိုက်တယ် ဆိုတဲ့အပေါ် မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ တာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးလှမောင်ရွှေက မဟုတ်မှန်ကြောင်းနဲ့ မေလမှာ ပြုလုပ်နိုင်မယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
အန်စီစီတီအဖွဲ့ဝင်တွေ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့မှာ ဧပြီ ၂၈ နဲ့ ၂၉ ရက်နေ့ထိ အစည်းအဝေး လုပ်နေတုန်း ဖြစ်ပါတယ်။
“ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ရွှေ့ဆိုင်းတယ်ဆိုတာ လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ အစိုးရ အဖွဲ့ဘက်က အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးဖို့ မေ ၁၇ ရက်နေ့ကို လုပ်နိုင် ဖို့ ညှိနှိုင်းနေတယ်။ ဒီနေ့ ညနေမှာ အဖြေသိရမှာပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ စားပွဲဝိုင်းမှာပဲ ဆွေးနွေးလို့ ရတာ၊ တခြားဘယ်မှာမှ ဆွေးနွေးလို့ မရနိုင်ဘူး။ ဒီလို ထွက်ပေါ်လာတာကလည်း အန်စီစီတီရဲ့ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ဘူး” လို့ ဦးလှမောင်ရွှေက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
အန်စီစီတီက ဧပြီ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲအတွက် အစိုးရနဲ့ မေလမှာ အကြမ်းဖျင်းတွေ့ဆုံမယ်လို့ ပြန်လည် သုံးသပ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်တွေအကြား တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးနေကြရာမှာ တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က လိုလားတဲ့ ဖက်ဒရယ်အသုံးအနှုန်း၊ ဖက်ဒရယ် တပ်မတော်ဆိုတာတွေကို အစိုးရဘက်က မလိုက်လျောနိုင်တဲ့အတွက် ဆွေးနွေးမှုကို တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ရပ်ဆိုင်းလိုက်တာလို့ အန်စီစီတီ အဖွဲ့ဝင် ဦးနိုင်ဟံသာရဲ့ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားပြီး ဘီဘီစီသတင်းဌာနက ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်နောက်ဖေး မီးဖိုချောင်ထဲက ပစ္စည်းတွေနဲ့ မျက်နှာအသားအရေလှပအောင် ဘယ်လိုလုပ်နိုင်သလဲ (အပိုင်း-၁)
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်မျက်နှာအသားအရေမှာ အဖုအပိန့်တွေ ထွက်လာလို့ စိတ်ညစ်ရပြီဟေ့ဆိုရင် ၀က်ခြံပျောက်ဆေးကို စဉ်းစားရတာကတစ်မျိုး၊ သွားဝယ်ရမှာ ဘာညာနဲ့အလုပ်ရှုပ်ဦးမှာကတစ်မျိုး ခေါင်းရှုပ်စရာပဲပေါ့။ ဒီတော့ အိမ်နောက်ဖေး မီးဖိုချောင်ထဲက အရာတစ်ချို့နဲ့ မျက်နှာအသားအရေ ကောင်းမွန်အောင် ဘယ်လိုပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
၁။ ၀က်ခြံအတွက် စိတ်မပူနဲ့။
မျက်နှာမှာ ၀က်ခြံထွက်လာပြီဆိုရင် မီးဖိုချောင်ထဲက ကြက်ဦးတစ်လုံးရယ်၊ စားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဇွန်းစာ ပျားရည်ကို ပထမဆုံးယူလိုက်ပါ။ ခွက်အလွတ်ထဲ ခလောက်ထားတဲ့ ကြက်ဥထဲ ပျားရည်ကိုထည့်ပြီး ရောမွှေလိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ မျက်နှာပေါ် ပါးပါးလေး သုတ်လိမ်းပြီး မိနစ် ၂၀ခန့်ကြာအောင် ထားလိုက်ပါ။ ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ဆေးကြောသန့်စင်လိုက်ရုံပါပဲ။
၂။အရေးအကြောင်းတွေအတွက် စိတ်ရှုပ်စရာ မလိုပါဘူး။
မျက်နှာမှာ အရေးအကြောင်းတွေ ပေါ်လာမှာစိုးရင် အိမ်နောက်ဖေးက ပစ္စည်းတစ်ချို့နဲ့ Mask လုပ်နည်းလေး ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ကြက်ဥတစ်လုံးရယ်၊ ကြက်ဥအနှစ်ရယ်၊ နောက် စားပွဲတင်ဇွန်းစာရှိတဲ့ ၀ိုင်နီ အားလုံးကို ရောမွှေပြီး ဘရက်ရ်ှလေးသုံးကာ မျက်နှာမှာ သုတ်လိမ်းပေးပါ။ ခြောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ ရေနွေးလေးနဲ့ ဆေးကြော သန့်စင်ပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့။ ဒါကို မကြာခဏလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် အရေးအကြောင်းတွေလည်း နည်းပါးသွားမှာ သေချာတယ်နော်။
၃။မျက်နှာအသားအရေ နီးမြန်းတာတွေအတွက်လည်း နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။
နီစပ်စပ်ဖြစ်နေတဲ့ မျက်နှာအသားအရေ ပိုင်ရှင်တွေအတွက် ကဖင်းဓာတ်ပါတဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို ရေခဲသေတ္တာထဲကို တစ်ညလောက်ထည့်ထားလိုက်ပါ။ တော်တော်လေး အေးသွားပြီဆိုရင်တော့ ချည်သား အ၀တ်စလိုဟာမျိုးနဲ့ စုပ်ယူပြီး မျက်နှာပေါ် သုတ်လိမ်းပါ။ ၁၀ မိနစ်ကျော်လောက် ထားပြီးရင်တော့ ရေအေးအေးလေးနဲ့ သစ်ချလိုက်ရုံပဲပေါ့။
လမ်းလျှောက်နေသူများကို တောင်းအေစ့်ယာဉ်မှဝင်ရောက်တိုက်မိပြီး မောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ရာ (၁)ဦးသေ၊ (၂)ဦးဒဏ်ရာရ
၂၈.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၂၃၃၅ အချိန် ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဆရာစံလမ်းအတိုင်း ဆရာစံမီးပွိုင့်ဘက်မှ ရန်ကင်းစင်တာဘက်သို့ယာဉ်မောင်း(စုံစမ်းဆဲ)
မောင်းနှင်လာသော ယာဉ်အမှတ်မသိ၊ တောင်းအေ့စ်အမျိုးအစားအဖြူရောင်
ယာဉ်မှ လမ်း၏ယာဘက်လမ်းစပ်အတိုင်း လမ်းလျှောက်သွားနေသူများ
ဖြစ်သည့် ဗဟန်းမြို့နယ်နေ ကိုအောင်ကိုထက်(၁၄)နှစ်၊ ကိုနေလင်းထွန်း (၁၇)နှစ်နှင့် ကိုမျိုးလှိုင်ဝင်း(၁၇)နှစ်တို့(၃)ဦးကို ၀င်ရောက်တိုက်မိခဲ့ပြီး
အဆိုပါယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ယာဉ်တိုက်ခံရသူများဖြစ်သည့် ကိုမျိုးလှိုင်ဝင်း
မှာ ဦးခေါင်းနောက်စေ့ပွန်း၊ ခါးပွန်း၊ ၀ဲမျက်ခုံးစုတ်ပြဲ၊ ယာခြေကျင်းဝတ်
ဖူးရောင်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့၍ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ပို့အပ်ကုသစဉ် သေဆုံး
သွားခဲ့ပြီး ကိုအောင်ကိုထက်တွင် နဖူး၊ နှာတံ၊ အပေါ်နှုတ်ခမ်းတို့၌ ပေါက်ပြဲ
ဒဏ်ရာများနှင့် ကိုနေလင်းထွန်းတွင် နဖူး၊ ၀ဲပါး၊ ၀ဲလက်ခုံတို့၌ပွန်းပဲ့ပေါက်ပြဲ
ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သဖြင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် အတွင်းလူနာ(စိုးရိမ်ရ)များ
ယင်းကဲ့သို့ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ကာမောင်းနှင်ထွက်ပြေးသွားသူ ယာဉ်မောင်း
အား ဗဟန်းမြို့မရဲစခန်းယာဉ်(ပ)၄၇/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၀၄-က/၃၃၈/၂၀၂
ဖြင့် အမှုဖွင့်လှစ်ကာ ဖမ်းဆီးရမိရေးစုံစမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း
၂၈.၄.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁၃၀၅ အချိန် ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့မရဲစခန်းမှ
တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ညောင်ပင်ကျေးရွာအရှေ့ဘက်
လယ်ကွင်းအတွင်း၌ အမျိုးသားတစ်ဦးဒဏ်ရာများဖြင့် လဲကျ သေဆုံးနေ
ကြောင်း ညောင်ပင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးခင်မောင်ဦးမှ အကြောင်း ကြားလာသဖြင့် သက်သေများနှင့်အတူ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့စစ်ဆေးခဲ့ရာ သေဆုံးသူမှာ ၎င်းကျေးရွာနေ ဦးရဲနိုင်၏နေအိမ်တွင် လယ်သူရင်းငှားလုပ်သူ ဦးအေးငြိမ်း၊ (၅၂)နှစ်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီး လယ်ကန်သင်းရိုးဘေးတွင် မှောက်လျက်အနေအထားဖြင့် ဦးခေါင်းထိပ်
ပြတ်ရှ ဒဏ်ရာ(၂)ချက်ရရှိကာ သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဦးအေးငြိမ်းသေဆုံးရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းအရေးယူပေး
ပါရန် ညောင်ပင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးခင်မောင်ဦးမှ တိုင်တန်းလာ
သဖြင့် ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ သရက်ပင်ချောင်နယ်မြေရဲစခန်း
(ပ)၂၄/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ-၃၀၂ ဖြင့်အမှုဖွင့်ကာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို စုံစမ်း
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခံခဲ့ရာ မှာ ကုဒ်နံပါတ် ၉၁၄ ဖြည့်စွက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး စာရင်းမသွင်းနိုင်ဘဲ ချန်လှပ်ခဲ့ရတဲ့ ဒေသတွေမှာ သန်ခေါင်စာရင်း ပြန်လည်ကောက်ခံနိုင်ရေး အတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောမြို့တွေက မွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ ကြပါတယ်။
သန်းခေါင်စာရင်းပုံစံစာရွက်မှာ အခြားလူမျိုးအမည်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကုဒ်နံပါတ် ၉၁၄ ရဲ့ ဘေးကွက်လပ် မှာ မိမိတို့ရဲ့ လူမျိုးအမည်ကို လွတ်လပ်စွာရေးသား ခွင့်ပြုထားပေမဲ့၊ အဲဒီကွက်လပ်နေရာမှာ ရိုဟင်ဂျာ လို့ ရေးသား ခွင့် မပြုဖို့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က သပိတ်မှောက် ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာကြောင့် အစိုးရက ရိုဟင်ဂျာ အဖြစ် ထည့်သွင်းကောက်ခံလိုသူတွေကို ချန်လှပ် ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောအပါအဝင် တချို့နေရာတွေမှာ သန်းခေါင်စာရင်းမှာ ရိုဟင်ဂျာအဖြစ် ထည့်သွင်းလို သူ တွေကို စာရင်းမကောက်ခံပဲ ချန်လှပ်ထားခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ချန်လှပ် ထားခဲ့ရတဲ့ မူဆလင်တွေကို ကုဒ်နံ ပါတ် ၉၁၄ ရဲ့ ဘေးကွက်လပ်မှာ ဘာတစ်ခုမှ မရေးသွင်းဘဲ ကွက်လပ်အတိုင်း ထားပြီး ဆွေးနွေးမှုအပေါ် မွတ်စလင်တွေဘက်က မေလ ၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး လက်ခံမယ်ဆိုရင် မွတ်စလင်တွေအတွက် သန်ခေါင် စာရင်းကို ပြန်လည်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းမြိုင်က ပြောပါတယ်။
"မနေ့က လ.ဝ.က ဒုဝန်ကြီးလာပြီးတော့ ဘူးသီးတောင်၊မောင်တောမှာ ဆွေးနွေးတယ် ၊ဆွေးနွေးတယ် ဆိုတော့ သူတို့က အစိုးရလည်း ဘင်္ဂါလီလို့ ထည့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်း သူတို့က မဟုတ်ဘူးပေါ့ ၊တခါ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာလည်း ငါရိုဟင်ဂျာဆိုတာလည်း ဘယ်ကဆင်းလာတာလည်းဆိုတာ တချို့လူတွေ ကမသိဘူး၊ အခုနောက်လ ၅ ရက်နေ့ကိုကောက်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်၊ ဘယ်လိုကောက်မလဲတော့ အဖြေတစ်ခုတော့ထွက်လာပါမယ်"
ဒါပေမယ့် မွတ်စလင်အချို့က ဘင်္ဂါလီလူမျိုးအဖြစ် စာရင်းပေးသွင်းခဲ့တာတွေရှိသလို၊ ဧပြီလ ၁ဝ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း မှာလည်း ဘင်္ဂါလီလူမျိုးအမည်နဲ့ စာရင်းလာသွင်းသူ ၆ဝဝဝ ကျော်ရှိတယ်လို့လည်း ဗဟိုသန်ခေါင်စာရင်း ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
(၇) မိမိကိုယ်ကိုယ် စည်းကမ်းတကျ ကောင်းမွန်အောင် နေထိုင်လိုက်ပါ
(၈) သူတစ်ပါး စကားပြောနေတဲ့ အချိန်မှာ နားထောင်ပါ။ စကားကို လုမပြောပါနဲ့။
(၉) ဘဝဟာ တိုတိုလေးမို့ အရာရာကို အကောင်းဘက်မှ မြင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ
(၁၀) မဆုတ်မနစ်သော အပတ်တကုတ်ကြိုးစားသော လုံ့လ ဝီရိယ ရှိဖို့တော့ လိုတယ်
လန်ဒန်မြို့မှ တောင်းရမ်းစားသောက်သူများ တစ်ပတ်လျှင် စတာလင်ပေါင် ၂၈ဝဝ ရရှိ
လန်ဒန်မြို့ ဘာမင်ဂမ်အရပ်ရှိ တောင်းရမ်း စားသောက်သူများသည် တစ်ပတ်လျှင်ဝင်ငွေ စတာလင်ပေါင် ၂၈ဝဝ တောင်းရမ်းရရှိပြီး အဆိုပါငွေများမှာအရက်သောက်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းဖြင့်
ကုန်လေ့ရှိကြောင်း Big Issue မဂ္ဂဇင်း၏ ထုတ်ဝေသူများက ဆိုသည်။ Big Issue မဂ္ဂဇင်းအား ဂျွန်ဘတ် နှင့် ဂေါ်ဒင်ရော့ဒစ်က ၁၉၉၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာတွင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အိမ်ရာမဲ့များ ကိုယ်ပိုင် ဝင်ငွေရရှိစေရန် ရည်ရွယ်သော ပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
''တောင်းရမ်းစားသောက်တာက တရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာ မဟုတ်ပေမယ့် ဒီလူတွေက ပိုက်ဆံအတော်ရကြတယ်။ နောက်ပြီး သူတို့က ပိုက်ဆံမစုမိဘူး။ ဘယ်တော့မှ လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံမရှိဘူး။ မူးယစ်သောက်စားတာနဲ့ပဲကုန် တယ်'' ဟု Big Issue ၏မန်နေဂျာတစ်ဦးက ဆိုသည်။
သို့ရာတွင် Big Issue မဂ္ဂဇင်းအား လက်ပွေ့ရောင်းချသူ အိမ်ရာမဲ့များမှာ တစ်နေ့လျှင် စတာလင် ပေါင် ၃၅ သာဝင်ငွေရသော်လည်း ကိုယ့်ခြေထော က် ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
''လက်ပွေ့ရောင်းသူတွေက အနိုင်ကျင့်ခံရကောင်း ခံရနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ လမ်းလုံခြုံရေးတွေကို စောင့်ကြည့် ဖို့ မေတ္တာရပ် ခံထားပါတယ်။ အိမ်ရာမဲ့သူ တွေက အလုပ်လေးတစ်ခု လိုချင်ကြတယ်။
အခု သူတို့ကို လက်ပွေ့ရောင်းတဲ့ အလုပ်ပေးထားတယ်။ တကယ်ခက် တဲ့အလုပ်ပါ။ တောင်းရမ်းစားတဲ့ဘဝကနေ အပြောင်းအလဲ လုပ်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပါပဲ'' ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ အဆိုပါ လက်ပွေ့ရောင်းချသူများသည် မဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ်လျှင် ၁ ဒသမ ၂၅
စတာလင်ပေါင် ပေးချေရပြီး ၂ ဒသမ ၅ဝ စတာ လင်ပေါင်ဖြင့် ပြန် ရောင်းခွင့်ရှိကြောင်း သိရသည်။